Home Wararka Been Iyo Marin Habaabin ku jirta Qorshaha 2020-25 oo ku Aadan Xaraashka...
Been Iyo Marin Habaabin ku jirta Qorshaha 2020-25 oo ku Aadan Xaraashka Shidaalka
Wasiirkii ee wasaaradda Betrooka Mudane Maxamed Mukhtaar ayaa waxaa uu bartiisa Facebook ku soo qoray qoraal muhiim ah oo uu kaga hadlay marin habaabin weyn oo ku jirta qorashaha shanta Sano ee dowladda ee 2020-2025 oo ku aadan shidaalka. Wasiirka oo aqoon u leh hawlaha shidaalka, ila markaan tilmaami kara haddii ay jiraan wax aan macquul ahayn ayaa isagoo gudanaya waajibaadkiisa distuuriga ah ee muwadinimmo waxaa uu bartiisa ku muujiyey iska hor imaadyo marin habaabin ah oo qorasha qeybta ku aadan shidaalka ku jirta. Halkaan ka akhriso qoraalka wasiirkii hore oo dhan:
“Waxaan u hambalyaynayaa Wasaaradda Qorsheynta iyo dhamaan intii ka so shaqeysay diyaarinta Qorshaha 9-aad ee Horumarinta Qaranka. Qorshaha oo ka kooban 400-bog, inta uu dhaxeysa bogga 226 – 228 waxaa looga hadlayaa arimaha shidaalka. Qoraalka waxaa ku jiro taariikho iska hor imaanaya, haddii aanan si fiican looga fikirina Soomaaliya u keeni karo culeys. Bogga 226, faqradiisa 10.1 waxa uu lee yahay “Dowladdu waxay qorsheyneysaa inay bixiso 15 xermo (blocks) 6-da bilood ee soo socota ka dibna kuwa kale loo bixiyo si joogto ah. Dowladda waxay haminaysaa inay bilowdo shati siinta sahaminta batroolka iyo macdantaka hor Maarso 2020.”
Waxaan rajaynayaa in qoraalka Qoshaha Qaran iyo qaab maamulka kheyraadka noo saxmaan.”
Maaha tan oo kaliya khadaadka ku jira qorshaha ee waxaa jira kuwa badan oo u baahan inay qof waliba oo aqoon u leh ama maadada uu aqoonteeda leeyahay uu ka eego qorshaha kan oo ah waajibaad distuuri ah oo muwadin kastaa saaran.
MOL waxay ka qortay maqaalkan kooban: